အရသာ spaghetti စာရွက်ရွှေဖရုံသီး - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ "Delicious spaghetti စာရွက်ရွှေဖရုံသီး - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
အရသာ spaghetti စာရွက်ရွှေဖရုံသီး - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု 29 ဇူလိုင်လ 2019
ပြည်သူ့များသောအားဖြင့်ခေါက်ဆွဲနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအတွက်အထူးစျြမွတျနိုးပြီ။ ဒါဟာကမ္ဘာတဝှမ်းနောက်လိုက်ရှိကြောင်းတစ်ပန်းကန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးကြွယ်ဝသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်သော spaghetti ဖရုံသီးကဲ့သို့ချက်ပြုတ်နည်းများမကြာခဏ atypical သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြစ်ကိုရိပ်မိကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ဤအတန်ငယ်မှားအမြင်အချို့ကိုသင်ဟင်းလျာများပူဇော်နိုင်ပါတယ်ပြောင်းလဲပစ်ချင်တယ်။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်တစ်ဦး spaghetti စာရွက်ရွှေဖရုံသီးပြင်ဆင်ထားရန်သင်မည်သို့ပြသ။ အဆိုပါရလဒ်အံ့မခန်းပါ!
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျနေပါလျှင်, သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်းခေါက်ဆွဲမပါဘဲမရှငျနိုငျသောသူတို့ကိုလူများ၏တဦးတည်းကျန်းမာအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်။ ပေါင်းစပ် ဘိုဟိုက်ဒရိတ် နှင့်ဗီတာမင်ရွှေဖရုံသီး၏ခြွင်းချက်အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ခေါက်ဆွဲ!
ဒီကပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးဟုလူသိများသည့်ဂန္စာရွက်ပူဇော်, ဒါပေမယ့်လည်းအခြား, သငျသညျပွငျဆငျဖို့လိုခငျြစေမည်ဖြစ်သော။ အဆိုပါအယူအဆအစဉ်မပြတ်ဆုံးအရသာဟင်းလျာများအတွက်အမျိုးမျိုးကိုရောက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဂန္ spaghetti စာရွက်ရွှေဖရုံသီး
ယေဘုယျအားဖြင့်ရွှေဖရုံသီးလိမ်းဆေးပြင်ဆင်ထားရန်အသုံးပြုသောသို့မဟုတ် velvety input ကို, ဒါမှမဟုတ်တခြားစင်ကြယ်သောအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းလည်းသိသိသာသာဟင်းလျာများ seasoning သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဘို့အဝက်အူချောင်းစေနိုင်သည်။ ဒါဟာသင်ကြှနျုပျတို့သညျဤစာရွက်နှင့်အတူတာဖြစ်ကြောင်းဦးတည်ထားတဲ့စိတ်ကူးပေးရရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြင်ဆင်မှု၏ဂန္စာရွက်ထဲမှာ, သင်သုံးပါလိမ့်မယ် ရှေဖရုံသီး spaghetti များအတွက် topping အဖြစ်။ အဘယ်အရာကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်အရသာများပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်အရသာလမ်းအတွက်ရောထွေးနေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။
spaghetti (300 ဂရမ်)
peeled3ဖရုံသီးခွက် (600 ဂရမ်)
1 ခွက်ကိုအရည်မုန့် (250 ml)
2 ဇွန်းသံလွင်ဆီ (30 ml)
2 ဇွန်း nutmeg (30 ဂရမ်)
1 ဇွန်းဆား (15 ဂရမ်)
1 ဇွန်းမြေပြင်ငရုတ်ကောင်း (15 ဂရမ်)
2 parmesan ခွက် (optional ကို) (200 ဂရမ်)
ဒါ့အပြင်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ: ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားရန်သင့်ကလေးကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု6ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဒယ်အိုးထဲမှာသံလွင်ဆီတစ်မိုးဖွဲသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ဆားနှင့်အတူအလတ်စားအပူကျော် strips တွေသို့မဟုတ်အချပ်များနှင့်ကြော်ထဲသို့ကြက်သွန်ဖြတ်ထည့်ပါ။
ထိုအခါကြက်သွန်နှင့်အတူဒယ်အိုးထဲတွင် peeled နှင့်ပါဝင်နေပါတယ်ရွှေဖရုံသီးချက်ထည့်ပါ။ ပျော့ပြောင်းသည်အထိကွတ်။
ဤအတောအတွင်း, ရေ, ဆီနဲ့ဆားနဲ့ထမင်းချက်နှင့်အတူဒယ်အိုးထဲတွင် spaghetti ထားတော်မူ၏။
အဆိုပါ spaghetti အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ add နှင့်အခြားမိနစ်2များအတွက်ချက်ပြုတ်။
ရွှေဖရုံသီးနှင့်မှိုနှင့်အတူ spaghetti စာရွက်
မူရင်းစာရွက်၏ဤအပြောင်းအလဲကပထမထက်အောင်မြင်ရန်ကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းတဲ့စေမည်။ သငျသညျအနညျးငယျအခြိနျပိုရှိပါကလည်း, သငျသညျအနညျးငယျထညျ့သှငျးနိုငျ pesto နှင့်ကြက်သားတန်းပါ။ သို့သျောလညျး သငျသညျရွှေဖရုံသီးနှင့်မှိုနှင့်အတူကပွငျဆငျပေးလျှင်, သင်အကောင်းဆုံးနှင့်အာဟာရစာရွက်ရပါလိမ့်မယ်။
200 ဆ spaghetti
2 (400 ဂရမ်) ရွှေဖရုံသီးခွက်ဖြတ်
½ခွက်ကို မှို (100 ဂရမ်)
2 ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့, အရေပြား
2 ဇွန်းအပိုအပျိုကညာသံလွင်ဆီ (30 ml)
¼ခွက်ကိုဝိုင်ဖြူ (62 ml)
ထို့အပြင်ဤအချက်ပြုတ်နည်းများရှာဖွေတွေ့ရှိ: ညစာအဘို့အချက်ပြုတ်နည်းများအခြေခံပြီး3အကောင်းဆုံးဖရုံသီး
ထို့နောက်ဒယ်အိုးထဲမှာ, ကြက်သွန်ဖြူနှင့်အတူ julienne သို့ကြက်သွန်ဖြတ်ကြော်။
ကြက်သွန်ပွင့်လင်းဖြစ်လာသောအခါ, မှိုထည့်ပါ။ 1 မိနစ်များအတွက်ချက်ပြုတ်ကြပါစို့။ ဆားထပ်ထည့်ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
ဤအတောအတွင်းတစ် griddle နှင့်ကင်သူတို့အပေါ်မှာကြက်သားရင်သားထားပါ။ ထိုအခါကိုအပိုင်းပိုင်းသို့သူတို့ကိုငါဖြတ်ဒယ်အိုးသူတို့ကိုထည့်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပေါငျးတို့သပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူဒယ်အိုးထဲသို့အနည်းငယ်အဖြူစပျစ်ရည်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်2မိနစ်ရောမွှေပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပန်းကန်မှအရသာ၏အထူးထိတွေ့ငါပေးမည်။
အဆိုပါ spaghetti စာရွက်ရွှေဖရုံသီး၏နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းနဲ့အတူ, သင်သည်သင်၏မိသားစုအာဟာရကြွယ်ဝပန်းကန်ပူဇော်အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရသာ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုစုံစမ်းစေအခမဲ့ခံစားရလိမ့်မည်!
အရသာခေါက်ဆွဲပြင်ဆင်ထားရန်4ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ
ကျနော်တို့4ဤဆောင်းပါး၌ယနေ့သငျသညျအရသာဟင်းလျာများကိုခံစားရန်အဘို့အခေါက်ဆွဲပြင်ဆင်ထားရန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေတင်ပြ။ Read more »
ဂျင်းနဲ့အရသာပိုင်အဘို့အကြော် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
ဝယ်သည့်ကြားနေအော်ဂဲနစ်တိုက်စစ်ပစ္စည်းဆွဲပါ။ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ